RiverBend R&R Exclusive Riverfront LogHome Acerage - I-Airbnb
RiverBend R&R Exclusive Riverfront LogHome Acerage
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSherry
Wamkelekile kwiRiverbend R&R Apho i-pavement iphela khona, iNdalo iqalisa iLog Home. Iimbono ezinomtsalane zoMlambo i-Elk ngelixa usekwidolophu yaseSparwood, BC. Ibandakanyiwe kulePropati iKhethekileyo kukufikelela kumalungelo okwabelwana ngawo phambi komlambo wabucala kwiindwendwe ezibhalisiweyo. Jabulela ukuloba, ukuhamba, ukuphumla kwiidesika okanye ecaleni komlambo. Ndwendwela zonke izinto eziluncedo edolophini. Indawo ekunyanzelekileyo kuyo abalobi, abafoti, abathandi bendalo kunye nokuhamba intaba / abathanda ukuhamba! Ifumaneka kwimizuzu engama-20 ukusuka eFernie.
Inikwe yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. IiTv ezimbini zeCable Smart (sebenzisa izixhobo zakho ukuba uyafuna), Ezingenazingcingo, iibhedi kunye neelinen, Umatshini wokuhlamba izitya, ukuSeta iKitchen egcweleyo, iWasha, Isomisi. Igumbi lokuhlala, igumbi lokuzonwabisa lokuhamba. Ininzi yezihlalo zangaphandle.
ISparwood inezinto ezininzi ezinomtsalane. Ilori enkulu eluhlaza, iKhosi yeGalufa yeNdawo, iMountain Biking, iDisc Golf, iPaki yokutshiza, iZiko loLonwabo kunye nePool yangaphakathi, iiNkundla zeTennis, iNkqubo yokuHamba uHambo, imiDlalo yeMbali, iiNtsuku zoMgodi wamalahle ngoJuni. Ibekwe ngokufanelekileyo kwimizuzu engama-20 ukusuka eFernie eneendawo zokutyela ezinkulu, iThiyetha yeMovie, iTheatre, iThenga kunye nokuzonwabisa okuninzi okunje ngeWhite Water Rafting, ukuHamba intaba kunye neSkiing!
Ukuba ndikufutshane nam okanye umyeni wam kwizakhiwo siya kuba kwinqwelwana yethu yokuhamba, ngelo xesha ndiya kunika iindwendwe zam indawo kodwa ndifumaneke xa kufuneka. Zive ukhululekile ukuthumela umyalezo nge-airbnb
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sparwood